Isika no topon’ny laka izao ! – MyDago.com aime Madagascar
Isika no topon’ny laka izao !
Adino sahady ve ny hafanam-po niseho teny IVATO ny 19 février teo ?
Nilaina ary hilaina foana ny fifampaherezana sy ny fifanohanana mandrapaha – tafapetraky ny Tetezamita ifanarahana sy tsy manavaka !
Tandremo fa sao halaim – panahy Isika ka hihamina sy ho faly fotsiny amin’ny halehiben’ny hetsika natao tamin’ny 19 février iny !
Tokony hisikina sy hiezaka Isika hitady ireo asa tsotra entina mifanampy an-davan’andro toa ny nofon-kena mitam-piahavanana : mifanohana , mitady dia eny ieao ireo fomba entina mizara ny fanampiana ho avy ,ny fiarovana izany fanampiana izany mba tsy hisy hangalatra..!
Ny tiako ho lazaina diatokony hiditra eo amin’ny sahan’ny fitantana Isika , ary raa azo hatao dia any amin’ny Fokontany no hatomboka io ezaka io !
Tsara koa ny hitohizan’ny fivoriana eny amin’ny kianjan’ny Magro fa ny resaka dia tokony hifantoka amin’ io fitantanana ny fanampiana , amin’ny fanazavana mihaska ny rafitry ny Tetamita ifanarahanasy tsy manavaka.., !
Manazava tsara fa io Tetezamita io no hikarakara ny famerenana ny filaminana sy ny fandriampahalemana eto amin’ ny Firenena ary hanomanana ny fifidianana izay ho Filoham-pirenena..!
Isika manoratra eto amin’ny trnpkala sy ireo mpitarika eny amin’ny kianja dia tokony hiezaka hanazava am-pahatsorana ny atsipirian ’ ny lalana sy ireo fandrim-pandrika avelatr’ireo mpanohitra sy hamotehana ireo fandrebirebena sy lainga afafin’izy ireo..
Marina fa nampihorohoro ny fat ary mitohy misambotra ny Malagasy sy manara-dalana..!
Koa be izay antso nalefa ho an’ny Foloalindahy sy ny paolisy mba hiaro ny Malagasy , mba hiaro ny fandriampahalena sy hitandro ny filamina eto amin’ny Firenena !
Asa , voarain’izy ireo ny antso maro ! Izaho mbola mamerrina ny antso , am-pirahaliana , :
« IZAO FOTOANA IZAO NO FOTOANA METY HOANAREO FOLOALINDAHY SY PAOLISY HANDRAISANAREO NY ANDRAIKITRA IZAY FANTATRAREO EO ANOLOHAN’ NY FIRENENASY NY MALAGASY ! »
Ho antsika Rehetra , hamafiso ny hetsika nataontsika tamin’ny 19 février teo ! Aoka Isika tsy handrak’ilo mby an-doha ! Mivavaha mafy ! Misikina: Ary mifanampia sy mifanohàna !
ISIKA NO TOMPON’Y LAKA IZAO !
Auteur Dr Celestin RobinPublié le 3 mars 2011 Catégories Malagasy, Négos, Politique
3 réflexions sur « Isika no topon’ny laka izao ! »
Asa rey olona izay nitranga ndray androany hariva, fa raha ny hitako t@ vao2 matv aloha, dia nisy nanapoaka baomba hono ny filohan’ny « f » teny @ marey masay fa tsy naninona. Dia mbola tsy fantatro ihany koa izay sampandraharaha misahana ny vao2 ankoatra ny matv tonga teny antoerana tamin’io, fa raha ny fahitako azy aloha dia toa montage izy iny satria raha olona anao izany dia manao sorona ny ainy, ka tsy hanapopoaka bomba fotsiny tsy hahavoa olona. Dia avy eo matv atsoina hitatitra ny vao2, satria raha rnm na hafa de tsy hinoan’ny olona. Eritrereto tsara anie!
Iza ndray no tadiavin’iro hariana any amponja?
Sa mitady handamoka ve ny fankatoavana iraisampirenena ka mitady antony tsy hanaovana fifampiresahana indray?
mba ovao ndray ny tetika rabitro fa efa fantatry ny olona na dia mbola tsy niloa bava aza ianao
3 mars 2011 à 23 h 35 min
Rabitro angaha manana hevitra izany fa i ratsirahonana no manoro hevitra saingy efa lany fika koa e!tsy mihemotra mihintsy isika fa efa mihavitsy an’isa ry zareo.
Ankoatran’izany dia misy zatovo mpanohana an’i radoma(elina)hatramin’izao satria hoe tafita tamin’ny afera fa tsy nila nianatra i TGV dia filamatra hono, ny an’zatovovavy sasany rehefa be vola dia mahafatifaty daholo na vorondolo aza mipoitra eo.Efa voa ilay toe-tsaina e.Soa ihany fa vitsy an’isa izy ireo.
Précédent Article précédent : Feuille de route, observations et propositions de la Mouvance Ravalomanana
Suivant Article suivant : Madagasikara, à contre sens !